Izindlela Ezingcono Zamahhala Nezamahhala ze-MS Office zango-2020 | Kusuka kuLinux
Izindlela ezihamba phambili zamahhala nezamahhala ze-MS Office zango-2020
Ngoba akekho imfihlo ukuthi ngaphakathi konke «Sistema Operativo», esetshenziswa kakhulu kuyo yonke into umsebenzisi ovamile imvamisa i «Navegador web» futhi i «Aplicaciones Ofimáticas», njenge Isihleli sombhalo, a Isifundi sefayela le-PDF noma okwaziwayo «Suite Ofimáticas», okungelutho ngaphandle kwesethi (iphakheji) yezinhlelo zokusebenza ezivumela ukuphathwa (ukudala, ukufunda, ukuguqulwa) kwamafayela nemibhalo yokusebenza kwansuku zonke emahhovisi noma emakhaya.
Ngakho-ke, yize kuvame ukusetshenziswa «MS Windows» kanye nokuhambisana kwayo «Suite Ofimática»ucingo «MS Office», iqiniso ukuthi bobabili, ngalokhu «Sistema Operativo» maqondana ne- «Distros GNU/Linux» kanti okunye, kuvame ukuba kuhle kakhulu ezinye izindlela zamahhala nezivuliwe, noma okungenani mahhala, engasetshenziswa yiwo wonke umuntu uku yenza umsebenzi wasehhovisi ngekhwalithi nokusebenza kahle.
Futhi noma, lokho okusha kwakho Ikhompyutha letha «Windows 10» ngenguqulo yesilingo ye I-Microsoft Office efakiwe, ongathenga kamuva noma uqhubeke nokuyisebenzisa ngesixazululo se-pirate, noma ulethe «Mac OS» ne «Suite Ofimática» Ngiyasebenza, okuhle kuzoba njalo ukukhetha ukusebenzisa i Imahhala futhi ivulekile i-Office Suite noma mahhala, futhi mhlawumbe ipulatifomu eminingi.
Ngakho-ke, ngezansi kokubuyekezwa okuncane kwendlela ngayinye eyaziwa kakhulu nenenani «Suite Ofimáticas» ukucabanga ngalo nyaka 2020 esikhundleni se «MS Office».
1 Izindlela zamahhala nezamahhala ze-MS Office zango-2020
1.1 Kumahhala futhi Kuvulekile
Izindlela zamahhala nezamahhala ze-MS Office zango-2020
LibreOffice, endala, eyaziwa futhi esetshenzisiwe «Suite Ofimática» i-del Umhlaba we-GNU / Linux njengamanje iya kulolu suku, ngenombolo ye- version I-6.4.0 beta 1 egatsheni lakho lokuhlola, inani le- Inguqulo ye-6.3.3 yegatsha layo lokuthuthuka elizinzile, kanye nenombolo ye- Inguqulo ye-6.2.8 yegatsha lakho elizinzile. Futhi ngezinguqulo ze- «Windows, Mac OS y Linux» ngezindlela ezahlukahlukene zamafayela wokufaka. NamiKufaka phakathi okwamanje, amaphakheji alandelayo: Bhala, i-Calc, i-Impress, i-Draw, i-Base ne-Math.
"ILibreOffice iyinkampani enamandla yehhovisi; isikhombimsebenzisi sayo esihlanzekile namathuluzi anamandla akuvumela ukuthi uveze ubuhlakani bakho futhi wandise umkhiqizo wakho. ILibreOffice ifaka izicelo eziningi ezenza ukuthi ibe yihhovisi elinamandla kunawo wonke le-Free and Open Source emakethe: Umbhali, iprosesa yegama, iCalc, ispredishithi, i-Impress, isihleli sesethulo, iDraw, uhlelo lwethu lokudweba ama-flowcharts, i-Base, i-database yethu kanye ne-interface namanye ama-database, kanye ne-Math yokuhlela amafomula wezibalo".
Ngokufingqa, «Libre Office» ingenye yamaphrojekthi aqinile kakhulu we Umhlaba we-GNU / Linux, ene-interface yomsebenzisi enhle kakhulu, yesimanje futhi enobungani, nangokukhula okusimeme nokusheshayo ngaphakathi kwe- Isoftware Yemvelo Ekhululekile nevulekile.
ICalligra Suite kusuka ekhasini layo elisemthethweni yi «Suite Ofimática» kusatshalalisiwe amafayela acindezelwe (tar.xz) equkethe ikhodi yayo yomthombo, noma kunjalo, ingafakwa kalula kusuka ezinqolobaneni eziningi ezaziwa kakhulu «Distros GNU/Linux».
Njengamanje, kuhamba ngenombolo ye- Inguqulo ye-3.1.0 yegatsha lakho elizinzile nenombolo yenguqulo 3.2.0 I-Alpha yegatsha lakho lentuthuko. Noma kunjalo, kuyo ungathola amafayela ayo wokufaka kuwo «MS Windows» en format .msi yezinguqulo ze 32 no-64 amabhithi, futhi noma ingenawo amafayela wokufaka we «Mac OS» Lokhu kungafakwa ngaphezulu kwayo, kusetshenziswa iMenenja yePhakeji eyaziwa njenge Homebrew.
Lona «Suite Ofimática» kuyingxenye ye- Umphakathi we-KDE, okunikezelwe ekukhiqizeni iSoftware Yamahhala. Futhi inikeza isethi ephelele yezicelo eziyi-8 ezihlangabezana nezidingo zokuphathwa kwehhovisi lehhovisi elijwayelekile, okungokulandelayo okulandelayo: Amagama, Isiteji, Ishidi, Ukugeleza, uKexi, futhi kuvame ukuhlanganiswa nabanye abavela ku-KDE Project, njenge IKarbon neKritangaphezulu Plans.
Ihhovisi lamahhala (iSoftmaker)
Ihhovisi Mahhala (Ashampoo)
Koku, okunye okubaluleke kakhulu kokubili yi «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» wakhe I-WPS y Ihhovisi Elikhululekile, kakhulu kangangokuba njengamanje ziza ngokuzenzakalela, okungenani ku-1 I-Linux Distro. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngalezi 2 «Suite Ofimáticas», sincoma ukuthi ufunde izindatshana zethu zangaphambilini mayelana nabo: I-WPS y Ihhovisi Elikhululekile.
Futhi uma ufisa nje ukuthanda enye insizakalo ye-inthanethi, ngoba izinketho ezilandelayo ziyatholakala:
I-MS OneDrive (MS Office Online)
Phakathi kwabanye abaningi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Izindlela ezihamba phambili zamahhala nezamahhala ze-MS Office zango-2020
UBenjamin Chile kusho
Umsebenzisi we-Manjaro Linux kusukela ngomsebenzisi we-2014 ne-Linux kusukela ngo-2003. Ngiwuthande kakhulu umbiko wakho ngamathuluzi wehhovisi ongafinyelela ikhwalithi noma adlule i-MS Office (i-LibreOffice ne-KDE suite Caligra) futhi ngasikhathi sinye kuyinjongo yami ukugcwalisa umsebenzi wakho wocwaningo kulawa mathuluzi asehhovisi anamaphakheji amabili we-office automation afakwe kwizinqolobane zeManjaro kusukela ngo-2017. Eyokuqala ivezwe futhi yahlanganiswa ngunjiniyela kanye nomlondolozi weVitor Lopes (@codesardine https://vitorlopes.me/) ebizwa nge-MS-OFFICE-Online ekuvumela ukuthi usebenzise insiza enikezwa yi-Microsoft Office 365 esipheqululini sakho uma une-akhawunti ye-imeyili ku-Outlook. Lo mklami uhlanganise lolu hlelo lokusebenza ku-Jade Desktop Environment yakhe ye-linux.
Futhi iphakethe lesibili livela enkampanini ye-OnlyOffice (https://www.onlyoffice.com/es/download-desktop.aspx), nephakheji yayo ye-OnlyOffice Docuements Desktop, esanda kunweba uhlelo lwayo olungasindi ukusekela amafayela we-MsOffice extension ku-Linux. Abasebenzisi be-Arch Linux, Manjaro, Debian nokunye ukusabalalisa babike ukuhlolwa okuhle noma impendulo kule nyanga maqondana nokuhambisana kwabo nohlelo lokuqala lweMicrosoft. Ingafakwa kumafomethi we-linux afana ne-Debian / Ubuntu, RPM ne-SNAP.
Siyabonga ngokuphawula kwakho okuphelele futhi okuhle kakhulu.
Yikuphi okuhambisana kakhulu ne-MS Office?
Kubo bonke engibazamile, ngingasho ukuthi okuhambisana kahle kakhulu nezakhiwo zeMicrosoft yiWPS Office, okuwukuphela kwento embi ngayo ukuthi iphathelene nomnikazi.
Ngizamile i-WPS kuphela futhi kubukeka kukuhle. Ukuphumula, i-LibreOffice yakho konke.
Linjani ihhovisi lamahhala?
Kusukela okokugcina ngiyizama, ngingasho ukuthi inokuhambisana okuhle nezinto zeMicrosoft, kepha inguqulo yamahhala ilula impela futhi uma ufuna ezinye izinketho ezisezingeni eliphakeme kuzodingeka utshale imali enguqulweni yayo ekhokhelwayo. Ngingakutshela ukuthi ubuke kangcono iLibreOffice futhi uma udinga ukuhambisana okuningi namafomethi weMicrosoft uneWPS Office.
Angikaze ngiyizame le Office Suite kodwa i-interface yayo yinhle kakhulu futhi iyafana naleyo ye-MS Office. Ngicabanga ukuthi ukuhambisana kwayo namafomethi wayo wefayela kufanele kube kuhle kakhulu ukuba nenguqulo ekhokhelwayo. Ngaphandle kwalokho, ngizame i-WPS kuphela futhi kubonakala kukuhle kakhulu.
Konke lokhu kushoda ngezinto ezimbili: umphathi wePIM namaphrojekthi ahlanganisiwe
Unephutha, i-OnlyOffice uma ingumthombo ovulekile kuhlelo lwe-Desktop Editors:
Ukuphawula okuhle nokunikela, Andrés!
Lapho ilayisense yami ku-MS Office iphela, ngafaka i-WPS ehlanganisa zonke izidingo zami ezishintshayo zehhovisi, njengoba ngisebenza nemibhalo yeqembu, ngicabanga ukuthi iyona ehlangana kangcono nabanye abasebenzisi abasebenzisa i-MS Office
Sanibonani iPentras. Futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho kokuhlangenwe nakho kwakho siqu.
Sawubona, esimweni sama-macros ngibonile ukuthi ngokusobala iyahambisana naleyo ye-MS Office, uyazi ukuthi uma zitholakala kunguqulo yamahhala noma ukuzisebenzisa kufanele ube nephakethe ye-premium?
URafael Casares kusho
Njengoba ukwazi ukubona, abaningi babhala ngesiNgisi futhi abadingi amathuluzi okulungisa noma amagama afanayo. I-wp engiyifakile ibingesiNgisi kuphela. Ngingumbhali ngeSpanishi futhi ngeshwa ayikho enye indlela esikhundleni segama, lapho kwake kwaba khona engcono eyayiyiZwi eliphelele, kepha kubonakala sengathi bayithenga ukuyisusa nokuthi ayizange incintisane neMicrosoft. Ngizame konke ku-opensuse, okuyi-distro engiyisebenzisayo, ayikho indlela, ngokwesibonelo ukufaka iwayini nokuzama inketho yokufaka igama noma ngabe lidala. Kimi okuyingxenye yangempela ye-corduroy yababhali ukusetshenziswa kwamagama afanayo, okuthile okuyisisekelo ukubhala nge-lexical richness nehhovisi lamahhala linakho, kepha alanele, alibhalwanga kahle, elinamaphutha, ngezinketho ezingezona ezokusetshenziswa okuvamile . Ngo-1998 ngicabanga ukuthi, ngabhalela i-imeyili kuphrojekthi yehhovisi yamahhala ukubacela ukuba bahlanganise isichazamazwi samagama afanayo nabomqondofana, bamangala futhi batholani? Bakwenzile ngokwengxenye, kuthathe amashumi eminyaka ukuthi yebo, uhlelo lokusebenza oluqhamuka ngaphandle kwehhovisi lamahhala okungenani ngeSpanishi nakuma-subprograms amaningana okumele alandwe ngokwahlukana futhi azi ukuthi angancipha kanjani futhi ahlanganiswe kusixhumi esibonakalayo. Kepha-ke izincazelo ziyadabukisa ngokwezinketho futhi azihambelani namagama akhulunywayo ngoba awakahloli ukuthi omqondofana abambalwa abalinikezayo anele yini. Uma benze ithesorasi elungile, bengingeke ngiphinde ngithinte windows futhi ngisebenzise isuse evulekile kukhompyutha enkulu engiyisebenzisela ukubhala nje. Angazi ukuthi ngenzeni ngaphezulu, ngiyazi ukuthi kubalulekile kepha kubukeka sengathi abantu bakholelwa ukuthi abadingi ukusebenzisa amagama afanayo.
Phendula kuma-rafael casares
Ngiyabingelela uRafael! Ngivumelana ngokuphelele nawe mayelana nephuzu leThesaurus iLibreOffice namanye ama-Office Suite angenayo. Kulabo bethu abasebenzisa ukubhala ngamandla, ngobungcweti noma ngobungcweti, leli iphuzu elingaxazululiwe. Ngiyabonga ngamazwana akho acebisa kakhulu.
ULuis E kusho
Ngihlanganise ama-suites ama-3 e-linux ngemisebenzi yami ehlukile yokuhlela amadokhumenti. Phakathi kwalezi kukhona iWPS Office, i-OnlyOffice (enye elula kakhulu futhi ehambisana kakhulu nemibhalo ye-MS Office) neFree Office, empeleni ine-interface efana kakhulu neye-office 2010 no-2019. Phakathi kwalawa ma-suites ama-3 ngingahlanganisa izidingo zami ezahlukene ngesikhathi sokubhala imibhalo yami. Enye yezinzuzo ze-Only and Free Office ukuthi i-interface yabo ngeSpanishi. Ihhovisi le-WPS libiza kancane ukushintsha ulimi lwesixhumi esibonakalayo, ngaphandle kwalokho konke kuhamba kahle!
Phendula uLuis E
Sanibonani Luis! Siyabonga ngokuphawula kwakho nangolwazi olunikelwe.
ICanonical idinga usizo lwakho ukuthuthukisa Ubuntu
I-snippet yekhodi ye-Java esetshenziswe kakhulu ku-Stack Overflow iqukethe iphutha